Malunga nathi-Qingdao TianHua Yihe Foundry Factory
Sineminyaka engaphezulu kwe-20 yamava okwenziwa kwesinyithi kunye neMveliso yoMveliso.
I-Qingdao TianHua Yihe Foundry Factory ebekwe kwisixeko esihle saseQingdao, sineminyaka engama-20 yamava kwimveliso yokwenziwa kweentsimbi.Sinikezela ngezisombululo zokwenziwa kwesinyithi ngokwesiko ngokweemfuno zabathengi, kubandakanya uyilo lweprototyping, ukuguqulwa komzobo, ukuvelisa, ulawulo lomgangatho, iingxelo, ukushicilela, ukupakishwa, ukulayishwa komgqomo kunye nesisombululo sokuhambisa.Inkonzo yethu enkulu yokwenziwa kwesinyithi ibandakanya isinyithi kunye netyhubhu eyenziwe, kubandakanya ukusika isinyithi (isarha, i-laser, ilangatye, iplasma), ukugoba kwesinyithi (ukugoba ishidi, ityhubhu / intonga / ukugoba kwecandelo, ukugoba ityhubhu), isitampu sesinyithi, umzobo onzulu, CNC. ukubetha, ukuwelda kunye nokwenza, ukudibanisa kunye nokugqitywa kwendawo.
Kunye neenjineli ezinamava, abasebenzi abanezakhono kunye nezixhobo eziphambili, iimveliso zethu zixhomekeke kumgangatho ozinzileyo kunye nenkangeleko enomtsalane iye yaqatshelwa ziimarike zasekhaya nezangaphandle.Ukongezelela, sinikezela ngenkonzo ye-ODM/OEM ethetha ukuba iimveliso zethu zinokulungelelaniswa ngokweemfuno zabathengi.
Zonke iindawo zentsimbi zithengiswa kakuhle e-UK, eJamani, eItali, eNorway, eGrisi, eIndiya, ePakistan, e-USA, eCanada, eChile, eMexico, eNew Zealand, eOstreliya nakwezinye iindawo njl. FMC,JETWAY,EMD Technologies njl.
IiMveliso zeTianHua YiHe kunye noomatshini
Iimveliso ezigqibeleleyo zivela kwimveliso egqibeleleyo kunye nezixhobo esizisebenzisayo, inani elikhulu lezixhobo zokusebenza ezisetyenziswayo ezinje ngoomatshini bokusika iLaser, oomatshini bokucheba ipleyiti, iNC punching Machine, umatshini wokugoba weNC, umatshini wokwenza intsimbi, ukugaya. umatshini njl Ngaphezu koko, abasebenzi bethu bolawulo kunye nabasebenzi bavulelekile ukuqhubeka nokuphucula ukufikelela kwinqanaba eliphezulu lokwaneliseka kwabathengi ekupakisheni, ukumakisha, kunye nokuhanjiswa. Abasebenzi bethu abafundisiweyo bahlala bekulungele ukunika impendulo ekhawulezayo kwiimfuno zabathengi kunxibelelwano olusebenzayo. , unikezelo lwamaxwebhu oluchanekileyo, kunye nokuhanjiswa kwangexesha ngalo lonke ixesha.
Ukugxininisa kumgaqo "woMgangatho uGqwesileyo, iNkonzo eNgcono", sijonge phambili ekwakheni ubudlelwane beshishini bexesha elide kunye nawe ngenzuzo efanayo.Abathengi abavela kwihlabathi liphela bamkelekile ukuba baqhagamshelane nathi, bahlangabezane neemfuno zemveliso yakho.
Indawo yokugcina izinto ezikrwada